भारतको असममा जन्मिएकी मिलन नेवारले सानो उमेरमै राजस्थानी, असमिया र बोडो भाषामा थुप्रै गीत गाएकी थिइन्। नेपालमा उनले ‘मिलन’ एल्बम निकाल्दै गायन यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। तर, ‘नोटबुक’ फिल्ममा समावेश ‘गाला रातै’ ले उनलाई स्रोतामाझ परिचित गरायो। सुगम संगीत र पाश्र्वगायन दुवैमा रुचाइएकी उनले पछिल्लो समय आफूले गाएका गीतमा आफैँ मोडलिङ गर्न थालेकी छिन्। शरीर छरितो बनाउन जिम जान थालेकी मिलनले ‘सम्पूर्ण’लाई आफ्नो फिटनेस अनुभव सुनाएकी छिन्।
मेरो शरीर सानैदेखि हेल्दी थियो। यस्तो जीउ भएको मान्छेले पानी खाए पनि मोटाउँछ। नेपाल आएर संगीतमा व्यस्त हुन थालेपछि न खानाको ठेगान हुन्थ्यो, न सुत्नको। त्यसपछि त शरीर बेलुनझैँ फुल्न थाल्यो। कतिसम्म भने बजारमा सपिङ गर्न गयो, आफूले मन परेको लुगा ठीकै नहुने। जहिल्यै ब्यागी लुगा लगाउनुपर्ने ! ७० केजी पुगिसकेकी थिएँ। स्टेजमा गीत गाउँदा पनि अप्ठ्यारो हुन थाल्यो। जबकि, हाम्रो पेशामा स्टेजमा छरितो गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ। सबैतिरबाट अप्ठ्यारो हुन थालेपछि डाइटिङ सुरु गरेँ। नभन्दै छ महिनामा १० केजी वजन घटाएँ।
जीउ कसिलो बनाउन जिम
नखाई–नखाई ज्यान त घटाएँ तर जीउडाल सोचेजस्तो भएन। घटेको ज्यान झन् नसुहाउने हुँदो रहेछ। मासु झोल्लिँदो रहेछ। यसपछि बल्ल जिम जान थालेँ। जिम गर्दा बडी टोन गर्ने र सेपअप गर्ने आइटम बढी गर्छु। कार्डियोदेखि स्ट्रेचिङसम्म पर्छन्। तर, जिम गरेपछि अनुहारमा पनि चार्म आउने रहेछ। मान्छे आत्मविश्वासी पनि हुने रहेछ। जिमले मान्छेलाई शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ बनाउँछ भन्ने अनुभव भएको छ।
आजभोलि जिममा रमाउन थालेकी छु। तर, डम्बेल बोकेर स्ट्रेचिङ गर्न एकदम गाह्रो लाग्छ। कार्यक्रमका लागि बाहिर गएको बेला स्ट्रेचिङ गर्छु र अनुकूल भएसम्म रनिङ गर्छु।
गायक भएकाले स्वरका लागि पनि हेल्दी डाइट जरुरी छ। जे पायो त्यही खाँदा स्वरमा असर पर्छ। त्यसमा पहिलादेखि नै सचेत थिएँ। तर, जिम जान थालेपछि जंक फुड चटक्कै छाडेकी छु। कार्बोहाइड्रेटले मोटोपन निम्त्याउँछ। त्यसैले जे खाँदा पनि कार्बोहाइड्रेट कति छ ? हेरेर मात्र खान्छु। ज्यान घटाउन अरू थोक छाडे पनि भात छोड्न नसक्ने अवस्था थियो। तर, अहिले खान छोडेकी छु। जिम जान थालेपछि धेरै कार्बोहाइड्रेट खान पाइँदैन। त्यसैले आजभोलि खानामा भात असाध्यै मिस गर्छु। तर, १५ दिनमा मात्र खाने रुटिन बनाएकी छु। १५ दिनमा एक दिन चाहिँ मज्जाले भात खान्छु।
प्रस्तुति:तस्बिरः कुबेर डंगोल